The Invisible Boy (2014) (App member only) ##unicode ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ "The invisible boy" ဆိုတဲ့အီတလီစွမ်းအားရှင်ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့မီခယ်လီဆီလန်ဇိုဟာဆိုရင်သာမန်ကျောင်းတက်နေတဲ့အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် ကျောင်းမှာလည်းသူ့ထက်လူကောင်ကြီးတဲ့သူတွေကအနိုင်ကျင့်တဲ့အတွက်အမြဲတမ်းသူ့ကိုယ်သူအလိုမကျဖြစ်နေတဲ့သူပေါ့ တစ်နေ့မှာတော့သူငယ်ချင်းတွေစုပြီးကျင်းပတဲ့ဟောလိုးဝင်း cosplay ပါတီကိုတက်ဖို့အတွက် ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကနေ စူပါဟီးရိုးဝတ်စုံတစ်စုံကိုသွားဝယ်လာခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒီဝတ်စုံဝတ်ပြီးပါတီသွားတဲ့ညမှပဲ ထူးဆန်းစွာမီခယ်လီတစ်ယောက် ကိုယ်ပျောက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုရသွားပါတယ် ကိုယ်ပျောက်စွမ်းအားရသွားတဲ့မီခယ်လီတစ်ယောက်ကောင်းကောင်းမပျော်နိုင်ခင်မှာပဲ ဒီလိုစွမ်းအားတွေရှိတဲ့လူတွေနောက်ကိုလူဆိုးတွေလိုက်ပြီးဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကိုသိလိုက်ရပါတော့တယ် ကျောင်းသားအရွယ်သာရှိပြီးငယ်ရွယ်သေးတဲ့မီခယ်လီတစ်ယောက်မကောင်းတဲ့သူတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်ပါ့မလား စွမ်းအားတွေကရောတကယ်ပဲဝတ်စုံကနေရရှိခဲ့တာလားဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမယ့်ကားလေးဖြစ်လို့ လက်မလွှတ်တမ်းကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ "The invisible boy" ဆိုတဲ့အီတလီစြမ္းအားရွင္ကားေလးကိုတင္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့မီခယ္လီဆီလန္ဇိုဟာဆိုရင္သာမန္ေက်ာင္းတက္ေနတဲ့အ႐ြယ္ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္ ေက်ာင္းမွာလည္းသူ႔ထက္လူေကာင္ႀကီးတဲ့သူေတြကအႏိုင္က်င့္တဲ့အတြက္အၿမဲတမ္းသူ႔ကိုယ္သူအလိုမက်ျဖစ္ေနတဲ့သူေပါ့ တစ္ေန႔မွာေတာ့သူငယ္ခ်င္းေတြစုၿပီးက်င္းပတဲ့ေဟာလိုးဝင္း cosplay ပါတီကိုတက္ဖို႔အတြက္ ဆိုင္တစ္ဆိုင္ကေန စူပါဟီး႐ိုးဝတ္စုံတစ္စုံကိုသြားဝယ္လာခဲ့ပါတယ္ အဲ့ဒီဝတ္စုံဝတ္ၿပီးပါတီသြားတဲ့ညမွပဲ ထူးဆန္းစြာမီခယ္လီတစ္ေယာက္ ကိုယ္ေပ်ာက္ႏိုင္တဲ့စြမ္းအားကိုရသြားပါတယ္ ကိုယ္ေပ်ာက္စြမ္းအားရသြားတဲ့မီခယ္လီတစ္ေယာက္ေကာင္းေကာင္းမေပ်ာ္ႏိုင္ခင္မွာပဲ ဒီလိုစြမ္းအားေတြရွိတဲ့လူေတြေနာက္ကိုလူဆိုးေတြလိုက္ၿပီးဖမ္းဆီးဖို႔ႀကိဳးပမ္းေနတာကိုသိလိုက္ရပါေတာ့တယ္ ေက်ာင္းသားအ႐ြယ္သာရွိၿပီးငယ္႐ြယ္ေသးတဲ့မီခယ္လီတစ္ေယာက္မေကာင္းတဲ့သူေတြကိုရင္ဆိုင္ႏိုင္ပါ့မလား စြမ္းအားေတြကေရာတကယ္ပဲဝတ္စုံကေနရရွိခဲ့တာလားဆိုတာကိုစိတ္ဝင္စားဖြယ္ၾကည့္ရႈရမယ့္ကားေလးျဖစ္လို႔ လက္မလႊတ္တမ္းၾကည့္ရႈအားေပးၾကပါဦးေနာ္ Review – Phyu Sin File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : 720p Blu-ray,1080p Blu-ray Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin Encoded by Arrow ==================================================================== App ေဒါင္းရန္ App Link မန်ဘာဝင်လိုသူများ viber – 0969117714
IMDB: 6.2/10 3,704 votes
Dishkiyaoon (2014) (App member only) ##unicode ဒီဇာတ်ကားကတော့ ဘောလိဝုဒ်အက်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပဲဖြစ်ပြီး နာမည်ကျော်မင်းသားကြီး Sunny Deolနဲ့ Harman Bawejaတို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းပါ မွန်ဘိုင်းဒုစရိုက်ဂိုဏ်းလောကရဲ့ရူပ်ထွေးပုံတွေ၊ အာဏာလုကြတဲ့ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တွေအပြင် ဂန်းစတားတစ်ယောက်မှာလည်း အသည်းနှလုံးရှိပြီးချစ်တတ်တဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းအဆွေးလေးကိုပါမြင်တွေ့ရမှာပါ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက အိပ်မက်က ဂန်းစတားတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ ဗစ်ကီဆိုတဲ့ကောင်လေးဟာ ကြီးလာတော့လည်း လူမိုက်ဘိုးတော် တိုနီနဲ့ အမြဲအချိန်ကုန်ခဲ့ပါတယ် သူ့သားကိုအလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်စေချင်တဲ့ သူ့အဖေက သူ့ကိုအိမ်ကနှင်ချလိုက်တော့ ဗစ်ကီက တိုနီ့အိမ်မှာပဲနေတော့ပြီး တိုနီကို အဖေလို့သတ်မှတ်ထားခဲ့ပါတယ် ဒီလိုနဲ့ မွန်ဘိုင်းလူမိုက်ဂိုဏ်းလောကကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ ဗစ်ကီ့ကိုလည်း တိုနီက တစ်နေ့မှာ အာဏာအရှိဆုံးလူဖြစ်စေချင်ခဲ့ပါတယ် သူတို့ရဲ့ဒုစရိုက်ဂိုဏ်းလောကရဲ့အာဏာလုမှု၊ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကြောင့် သူ့ရဲ့မွေးစားအဖေလိုဖြစ်နေတဲ့တိုနီအသတ်ခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ ဗစ်ကီ ဘဝအပြောင်းအလဲကြီးပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာဇာတ်ဝင်ခန်းတွေနဲ့ ဗစ်ကီရဲ့ဂန်းစတားဘဝကိုမြင်တွေ့ရမလဲဆိုတာတော့ ဒီဇာတ်ကားမှာစောင့်ကြည့်ပေးပါဦး ဒါ့အပြင် ဗစ်ကီရဲ့အလုပ်အကိုင်ကြောင့် သူ့ရဲ့အချစ်ရေးမှာဘယ်လိုအနှောင့်အယှက်တွေ သနားစရာတွေဖြစ်လာမလဲမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်လို့ကြည့်ရူအားပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီဇာတ္ကားကေတာ့ ေဘာလိဝုဒ္အက္ရွင္ဇာတ္ကားေကာင္းတစ္ကားပဲျဖစ္ၿပီး နာမည္ေက်ာ္မင္းသားႀကီး Sunny Deolနဲ႔ Harman Bawejaတို႔ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ဇာတ္ကားေကာင္းပါ မြန္ဘိုင္းဒုစ႐ိုက္ဂိုဏ္းေလာကရဲ႕႐ူပ္ေထြးပုံေတြ၊ အာဏာလုၾကတဲ့ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကြက္ေတြအျပင္ ဂန္းစတားတစ္ေယာက္မွာလည္း အသည္းႏွလုံးရွိၿပီးခ်စ္တတ္တဲ့အခ်စ္ဇာတ္လမ္းအေဆြးေလးကိုပါျမင္ေတြ႕ရမွာပါ ငယ္ငယ္ေလးကတည္းက အိပ္မက္က ဂန္းစတားတစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္ခဲ့တဲ့ ဗစ္ကီဆိုတဲ့ေကာင္ေလးဟာ ႀကီးလာေတာ့လည္း လူမိုက္ဘိုးေတာ္ တိုနီနဲ႔ အၿမဲအခ်ိန္ကုန္ခဲ့ပါတယ္ သူ႔သားကိုအလုပ္ေကာင္းေကာင္းလုပ္ေစခ်င္တဲ့ သူ႔အေဖက သူ႔ကိုအိမ္ကႏွင္ခ်လိုက္ေတာ့ ဗစ္ကီက တိုနီ႔အိမ္မွာပဲေနေတာ့ၿပီး တိုနီကို အေဖလို႔သတ္မွတ္ထားခဲ့ပါတယ္ ဒီလိုနဲ႔ မြန္ဘိုင္းလူမိုက္ဂိုဏ္းေလာကကိုဝင္ေရာက္လာတဲ့ ဗစ္ကီ့ကိုလည္း တိုနီက တစ္ေန႔မွာ အာဏာအရွိဆုံးလူျဖစ္ေစခ်င္ခဲ့ပါတယ္ သူတို႔ရဲ႕ဒုစ႐ိုက္ဂိုဏ္းေလာကရဲ႕အာဏာလုမႈ၊ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေတြေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕ေမြးစားအေဖလိုျဖစ္ေနတဲ့တိုနီအသတ္ခံလိုက္ရတဲ့အခါမွာေတာ့ ဗစ္ကီ ...
IMDB: 5.2/10 1,022 votes
The Pirates (2014) ##unicode နောက်ဆုံးအသစ်ထွက်ရှိထားတဲ့ The Pirates: The last royal treasure ဇာတ်ကားက အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရရှိထားပြီး Alphaမှာလည်းတင်ဆက်ပေးထားပါတယ် ဒီတစ်ခါမှာတော့ အဲဒီကားရဲ့အရှေ့ကထွက်ရှိထားတဲ့ ပင်လယ်ဓားပြဇာတ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ နာမည်ကြီးသရုပ်‌ဆောင်မြောက်များစွာပါထားပြီး Crush landing on you ထဲက မင်းသမီး ဆွန်ရီဂျင်းအပြင် ဆူလီလေးကိုပါမြင်တွေ့ရမှာပါ စိတ်လှုပ်ရှားစရာဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကို ဟာသလေးတွေနဲ့ရောထားလို့ လက်မလွှတ်တမ်းကြည့်ရူသင့်တဲ့ဇာတ်ကားကောင်းပါပဲ ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာတော့ ထူးထူးဆန်းဆန်း မင်နိုင်ငံဧကရာဇ် ဂျိုဆွန်းကိုပို့ပေးလိုက်တဲ့ ရတနာတွေနဲ့တော်ဝင်တံဆိပ်တုံးပါတဲ့လှေကို ဝေလငါးတစ်ကောင်ကမြိုသွားခဲ့ပါတယ် ဒါ့ကြောင့် ခေါင်းမီးတောက်နေကြတဲ့ အမတ်တွေဟာ မင်းကြီးရဲ့အဆူအဆဲကိုခံရပြီး တော်ဝင်တံဆိပ်တုံးကိုအမြန်ရအောင်ရှာဖို့ အချိန်နှစ်ပတ်ပဲရခဲ့ပါတယ် ပင်လယ်အကြောင်းကို ကျွမ်းဝင်တဲ့ ပင်လယ်ဓားပြအဖွဲ့ကလည်း ဒီဝေလငါးကိုရှာပုံတော်ဖွင့်သွားမှာဖြစ်ပြီး ရတနာတွေကိုသတင်းကိုကြားလို့ တောပုန်းဓားပြအဖွဲ့ကပါ ဝေလငါးရှာပုံတော်ကိုဖွင့်ဦးမှာပါ ဝေလငါးကြီးကို သူတို့ ဘယ်လိုသည်းထိတ်ရင်ဖိုဖမ်းကြမလဲ ရတနာတွေကိုရှာကြမလဲဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားမှာစောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi ေနာက္ဆုံးအသစ္ထြက္ရွိထားတဲ့ The Pirates: The last royal treasure ဇာတ္ကားက ေအာင္ျမင္မႈေတြအမ်ားႀကီးရရွိထားၿပီး Alphaမွာလည္းတင္ဆက္ေပးထားပါတယ္ ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ အဲဒီကားရဲ႕အေရွ႕ကထြက္ရွိထားတဲ့ ပင္လယ္ဓားျပဇာတ္ကားကိုတင္ဆက္ေပးမွာပါ နာမည္ႀကီးသ႐ုပ္‌ေဆာင္ေျမာက္မ်ားစြာပါထားၿပီး Crush landing on you ထဲက မင္းသမီး ဆြန္ရီဂ်င္းအျပင္ ဆူလီေလးကိုပါျမင္ေတြ႕ရမွာပါ စိတ္လႈပ္ရွားစရာဇာတ္ဝင္ခန္းေတြကို ဟာသေလးေတြနဲ႔ေရာထားလို႔ လက္မလႊတ္တမ္းၾကည့္႐ူသင့္တဲ့ဇာတ္ကားေကာင္းပါပဲ ဒီဇာတ္လမ္းထဲမွာေတာ့ ထူးထူးဆန္းဆန္း မင္ႏိုင္ငံဧကရာဇ္ ဂ်ိဳဆြန္းကိုပို႔ေပးလိုက္တဲ့ ရတနာေတြနဲ႔ေတာ္ဝင္တံဆိပ္တုံးပါတဲ့ေလွကို ေဝလငါးတစ္ေကာင္ကၿမိဳသြားခဲ့ပါတယ္ ဒါ့ေၾကာင့္ ေခါင္းမီးေတာက္ေနၾကတဲ့ ...
IMDB: 6.5/10 3,350 votes
Jailbait (2014) ##unicode (18+ ခန်းတွေပါတာမလို့ မိသားစုနဲ့အတူကြည့်ဖို့တော့မသင့်တော်ပါဘူးနော်) ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်လောက်ကထွက်ရှိထားတဲ့Jailbait ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် နာမည်ကြီးမင်းသမီး Sara Malakul Lane ကအဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကြောင်းလေးကတော့ အန်နာနစ်ဆိုတဲ့ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးဟာသူ့ပထွေးရဲ့ မကောင်းကြံမှုကနေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ရင်း မတော်တဆသူ့ပထွေးဖြစ်သူကိုသတ်မိသွားပါတယ် ကံဆိုးစွာဘဲ အန်နာနစ်တစ်ယောက်ထောင်လေးနှစ်ကျခံခဲ့ရပါတယ် အန်နာတစ်ယောက် ထောင်ထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ ကြမ်းတမ်းတဲ့လောကကိုရင်ဆိုင်ရပါတော့တယ် ထောင်သားအချင်းချင်း နှိပ်စက်မှု တိုက်ခိုက်မှုဒဏ်တွေကိုခံစားရပါတော့တယ် ဒါ့အပြင်ထောင်မှူးဖြစ်တဲ့ ဖရန့်ခ်ဆိုတဲ့သူဟာလည်းထောင်သားမိန်းကလေးတွေအပေါ်မှာအသားယူပြီး မကောင်းကြံတဲ့သူဖြစ်နေပါတော့တယ် အန်နာတစ်ယောက်ငရဲခန်းကနေ ဘယ်လိုလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားသွားမလဲ သူ့ဘဝကို ဘယ်လိုပြန်လည်တည်ဆောက်မလဲဆိုတာကိုတော့ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦး ##zawgyi (18+ ခန္းေတြပါတာမလို႔ မိသားစုနဲ႔အတူၾကည့္ဖို႔ေတာ့မသင့္ေတာ္ပါဘူးေနာ္) ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေလာက္ကထြက္ရွိထားတဲ့Jailbait ဆိုတဲ့ဇာတ္ကားေလးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္ နာမည္ႀကီးမင္္းသမီး Sara Malakul Lane ကအဓိကပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအေၾကာင္းေလးကေတာ့ အန္နာနစ္ဆိုတဲ့ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးဟာသူ႔ပေထြးရဲ႕ မေကာင္းႀကံမႈကေန ကိုယ့္ကိုယ္ကိုခုခံကာကြယ္ရင္း မေတာ္တဆသူ႔ပေထြးျဖစ္သူကိုသတ္မိသြားပါတယ္ ကံဆိုးစြာဘဲ အန္နာနစ္တစ္ေယာက္ေထာင္ေလးႏွစ္က်ခံခဲ့ရပါတယ္ အန္နာတစ္ေယာက္ ေထာင္ထဲကိုေရာက္တဲ့အခါမွာေတာ့ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ေလာကကိုရင္ဆိုင္ရပါေတာ့တယ္ ေထာင္သားအခ်င္းခ်င္း ႏွိပ္စက္မႈ တိုက္ခိုက္မႈဒဏ္ေတြကိုခံစားရပါေတာ့တယ္ ဒါ့အျပင္ေထာင္မႉးျဖစ္တဲ့ ဖရန႔္ခ္ဆိုတဲ့သူဟာလည္းေထာင္သားမိန္းကေလးေတြအေပၚမွာအသားယူၿပီး မေကာင္းႀကံတဲ့သူျဖစ္ေနပါေတာ့တယ္ အန္နာတစ္ေယာက္ငရဲခန္းကေန ဘယ္လိုလြတ္ေျမာက္ေအာင္ႀကိဳးစားသြားမလဲ သူ႔ဘဝကို ဘယ္လိုျပန္လည္တည္ေဆာက္မလဲဆိုတာကိုေတာ့ဇာတ္လမ္းထဲမွာဆက္လက္ၾကည့္ရႈလိုက္ၾကပါဦး Review – Phyu Sin File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL,1080p WED-DL Genre : Crime, Drama, Romance Subtitle : Myanmar Subtitle ...
IMDB: 4.2/10 3,398 votes
Hot Young Bloods (2014) ဟုန်းဆောင်း အထက်တန်းကျောင်းက ကျောင်းသူ ယောင်းဆုဟာ စိတ်ကြမ်းလူကြမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီး လူမိုက်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ် နာမည်ကြီးပါတယ် သူတစ်ဖက်သတ်ကြိုက်နေတဲ့ ကျောင်းသားကတော့ ကန်ဂျောင်းဂီ ဖြစ်ပြီး ကျောင်းသူတွေကြားမှာ ရေပန်းစားတဲ့ playboy တွေ့မရှောင်ဖွန်ကြောင်သူပါ ဒါပေမယ့် ယောင်းဆုကိုတော့ တစ်ခြားကျောင်းက ကျောင်းသားလူမိုက် ခေါင်းဆောင် ဂွမ်ဆစ်က ကြိုက်နေတဲ့အတွက် လက်ရှောင်ထားခဲ့ပါတယ် တစ်နေ့တော့ ဟုန်းဆောင်းကျောင်းကို ဆိုးလ်မြို့က အပြစ်ကင်းပြီး ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ယွန်ဟီးဆိုတဲ့ ကျောင်းသူတစ်ယောက်ပြောင်းလာတဲ့အခါမှာတော့ playboy ကြီး ကန်ဂျောင်းဂီတစ်ယောက် ဘယ်လိုအကွက်တွေ ရွှေ့မလဲ တစ်ဖက်သတ်ကြိုက်နေတဲ့ယောင်းဆုကရော ဘယ်လိုတွေ နှောင့်ယှက်မှာလဲ ကျောင်းသားလူမိုက် ဂွမ်ဆစ်ကရော အရှုပ်တော်ပုံထဲကို ဘယ်လိုပါဝင်လာမလဲဆိုတဲ့ လေးပွင့်ဆိုင် လူငယ်ဟာသ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးကို ကြည့်ရှုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ် မင်းသမီးဖြစ်သူနဲ့ အရန်မင်းသားတို့ကလည်း ၂၀၁၈ ခုနှစ်ထွက် on your wedding day ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာ အတူသရုပ်ဆောင်ထားပါသေးတယ်။
The Dark Horse (2014) ##unicode ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ တစ်ချိန်တုန်းက စစ်တုရင်ချန်ပီယံတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး လက်ရှိမှာတော့ စိတ်ဝေဒနါကို ခံစားနေရတဲ့ ဂျန်နက်စစ်ဆိုတဲ့သူအကြောင်းကို ရိုက်ပြထားတာပါ။ ဖြစ်ရပ်မှန်ပေါ်အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဂျန်ဟာ စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံမှာ အချိန်အတော်ကြာနေပြီး အခြေအနေပြန်တည်ငြိမ်လာတော့ ပြန်ထွက်လာခွင့်ရပြီး သူ့အစ်ကိုနဲ့အတူနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့အစ်ကိုမှာ မာနာဆိုတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် သားလေးတစ်ယောက်လည်းရှိပါတယ်။ ဂျန်ဟာ ရပ်ကွက်ထဲက ကလေးတွေရဲ့စုစည်းရာ စစ်တုရင်အဖွဲ့လေးကို မျက်စိကျသွားပြီး ကလေးတွေကို နိုင်ငံအဆင့်ပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်အောင် ကူညီလေ့ကျင့်ပေးဖို့ ကြိုးစားပါတော့တယ်။ မာနာကလည်း စစ်တုရင်မှာ ဝါသနာပါပေမဲ့ သူ့အဖေကတော့ စစ်တုရင်ကစားတာကိုမကြိုက်ဘဲ သူတို့လူဆိုးဂိုဏ်းထဲကိုပဲ အတင်းဝင်စေပြီး ဂျန်ကိုလည်း အိမ်ကနေမောင်းထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ စိတ်ဖိစီးမှု လုံးဝခံလို့မရတဲ့ စိတ်ဝေဒနါရှင် ဂျန်တစ်ယောက် သူ့ကိုအားကိုးနေတဲ့ ကလေးတွေကို နိုင်ငံအဆင့်ချန်ပီယံပြိုင်ပွဲကြီးရောက်အောင် ကူညီပေးနိုင်ပါ့မလား... မာနာကို အဖွဲ့ထဲမှာဆက်ပါနိုင်ရော သူကြိုးစားနိုင်မလား... ဒါမှမဟုတ် စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံကိုပဲ ပြန်ရောက်သွားပြီး အားလုံးလက်လျှော့လိုက်ရမလား... ဆိုတာတွေကို ခံစားကြည့်ရှုရမှာပါ။ ##zawgyi ဒီဇာတ္ကားေလးကေတာ့ တစ္ခ်ိန္တုန္းက စစ္တုရင္ခ်န္ပီယံတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိမွာေတာ့ စိတ္ေဝဒနါကို ခံစားေနရတဲ့ ဂ်န္နက္စစ္ဆိုတဲ့သူအေၾကာင္းကို ႐ိုက္ျပထားတာပါ။ ျဖစ္ရပ္မွန္ေပၚအေျခခံၿပီး ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ဇာတ္ကားတစ္ကားျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်န္ဟာ စိတ္က်န္းမာေရးေဆး႐ုံမွာ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာေနၿပီး ...
IMDB: 7.5/10 5,777 votes
The Whistleblower (2014) ##unicode The whistle Blowerဇာတ်ကားကတော့ Hwang Woo sukဆိုတဲ့ ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ အကြီးမားလိမ်လည်မှုလုပ်ခဲ့တဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်အကြောင်းကို အခြေခံပြရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ Lee Jang Hwanက ကမ္ဘာပထမဆုံး ကလုန်းဆဲလ်ကိုဖန်တီးက ကုသလို့မရတဲ့ရောဂါရှိလူနာများကို ကုသနိုင်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုလူတွေကိုပေးခဲ့ပါတယ်။ ကိုရီးယားနိုင်ငံက လူတွေက သူ့ကိုနိုင်ငံ့မျှော်လင့်ချက်လို့ သဘောထားကာ ဘုရားသခင်နီးပါးလောက်အောင်ယုံကြည်ကြပါတော့တယ်။ Yoon Minchulက NBSသတင်းဌာနက ပရိုဂျူဆာအဖြစ် အမှန်တရားသတင်းတွေကိုဘဲ တင်ဆက်တက်သူပါ။ တစ်နေ့မှာ သူသတင်းစုံစမ်းရင်းနဲ့ Lee Janghwanရဲ့ labခန်းကို တရားမဝင်မျိုးဥတွေတင်ပို့နေတဲ့အကြောင်းကိုသိသွားကာ Lee Jang Hwanရဲ့ သုတေသနအကြောင်းကို စုံစမ်းခဲ့ပါတယ်။ Lee Jang Hwanရဲ့labခန်းမှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့သုတေသနပညာရှင် Shim Min Hoရဲသတင်းပေးမှုကြောင့် Lee JangHwanရဲ့ သုတေသနတစ်ခုလုံးက လုပ်ကြံဖန်တီးထားတာဖြစ်မှန်းသိခဲ့ရတယ်။ ကိုရီးယားပြည်သူတစ်ရပ်လုံးက ယံကြည်နေကြတဲ့ Lee Janghwanရဲ့ သုတေသနကြီးက အလိမ်အညာတစ်ခုဖြစ်နေကြောင်းကို Yoo Minchulတစ်ယောက် ဘယ်လိုသက်သေပြမလဲဆိုတာ ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi The whistle Blowerဇာတ္ကားကေတာ့ Hwang Woo sukဆိုတဲ့ ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွာ အႀကီးမားလိမ္လည္မႈလုပ္ခဲ့တဲ့ သိပၸံပညာရွင္အေၾကာင္းကို ...
Killers (2014) ##unicode Killers ဇာတ်ကားကတော့ Japanနဲ့ Indonesianတို့ ပထမဆုံးCollaborationလုပ်ပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်။ Bayuက ဂျာနယ်လစ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ သူဟာ နိုင်ငံရေးသမား Dharmaရဲ့ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုအကြောင်းကို လိုက်လံသတင်းရေးခဲ့တဲ့အတွက် တရားစွဲဆိုခံရပြီး အလုပ်ကနေရပ်နားခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကြောင့် သူ့မိန်းမနဲ့အဆင်မပြေက အိမ်ခွဲနေနေရတာပါ။ တစ်နေ့သူ့သမီးလေးကို သူ့မိန်းမအိမ်ပြန်ပို့ပြီး တက္ကဆီနဲ့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ တက္ကဆီသမားရဲ့ ဓားပြတိုက်မှုကြောင့်Bayuတစ်ယောက်လူသတ်မိသွားခဲ့ပါတယ်။ သူပထမဆုံးလူသတ်မိသွားတဲ့အချိန်မှာဘဲ အွန်လိုင်းကနေ လူတစ်ယောက်က သူ့ကိုဆက်သွယ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့လူကတော့ မိန်းကလေးတွေကို ပြန်ပေးဆွဲသတ်ဖြတ်ပြီး အဲ့လူသတ်မှုတွေကိုရိုက်ကူးကာ အွန်လိုင်းပေါ်တင်နေတဲ့ Nomuraဆိုတဲ့ဂျပန်လူမျိုးတစ်ယောက်ဘဲဖြစ်တယ်။ Nomuraက Bayuကိုလူသတ်ရတဲ့အရသာကို ခံစားစေခဲ့ပြီး သူနဲ့အတူလက်တွဲလုပ်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။သူ့ဘဝကို ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ Dharmaကိုလက်စားချေချင်တဲ့စိတ်နဲ့ Bayuတစ်ယောက်အဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကို လက်ခံပြီးလူတွေစသတ်မိပါတော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့မိန်းမနဲ့သမီးလေးကြောင့် Bayuတစ်ယောက် ဒီအလုပ်တွေကိုရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားချိန်မှာတော့ သူလုပ်ထားတဲ့အရာတွေကနေရုန်းထွက်ဖို့က ခက်ခဲလာပြီး Bayuတစ်ယောက် လူသတ်မှုတွေကို ရပ်တန့်နိုင်ပြီး သူ့မိသားစုကိုကယ်တင်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi Killers ဇာတ္ကားကေတာ့ Japanနဲ႔ Indonesianတို႔ ပထမဆုံးCollaborationလုပ္ၿပီး႐ိုက္ကူးထားတဲ့ကားျဖစ္ပါတယ္။ Bayuက ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ သူဟာ ႏိုင္ငံေရးသမား Dharmaရဲ႕ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈအေၾကာင္းကို လိုက္လံသတင္းေရးခဲ့တဲ့အတြက္ တရားစြဲဆိုခံရၿပီး အလုပ္ကေနရပ္နားခံခဲ့ရသူျဖစ္ပါတယ္။ဒီအေၾကာင္းေၾကာင့္ သူ႔မိန္းမနဲ႔အဆင္မေျပက အိမ္ခြဲေနေနရတာပါ။ တစ္ေန႔သူ႔သမီးေလးကို သူ႔မိန္းမအိမ္ျပန္ပို႔ၿပီး တကၠဆီနဲ႔ျပန္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ တကၠဆီသမားရဲ႕ ဓားျပတိုက္မႈေၾကာင့္Bayuတစ္ေယာက္လူသတ္မိသြားခဲ့ပါတယ္။ သူပထမဆုံးလူသတ္မိသြားတဲ့အခ်ိန္မွာဘဲ အြန္လိုင္းကေန လူတစ္ေယာက္က ...
IMDB: 6.4/10 4,736 votes
Plastic (2014) ##unicode ဒီဇာတ်ကားက British က တက္ကသိုလ်ကျောင်း သားတစ်စု credit card နဲ့ ရိုက်စားပြီး အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ကို ရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပါတယ် သူတို့က ကျိကျိတက်ချမ်းသာပြီး အသုံးအဖြုန်းကြီးတဲ့သူတွေဆီက credit card ကို plastic နဲ့ ပွား, သူတို့ email တွေကို ဝင် hack, ပစ္စည်းတွေဝယ်ပြီး ပြန်ရောင်းချနေတာပေါ့ ဒါပေမယ့် တစ်နေ့မှာတော့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်က အဘိုးကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ သေတ္တာကို ခိုးသွားခဲ့တယ် အဲ့ထဲက ခြေရာခံစက်နဲ့ ပိုင်ရှင်က သူတို့ကို လိုက်လံ ရှာဖွေပြီး သူဆုံးရှုံးသွားတဲ့2million pounds ကို ၂ပတ်အတွင်း ပြန်လျော်ခိုင်းခဲ့တယ် သူတို့တွေက credit card company မှာ အလုပ်လုပ်နေတယ့် ကောင်မလေးနဲ့ အဖွဲ့ဖွဲ့ပြီး နိုင်ငံခြားမှာ credit card သုံးတဲ့သူတွေကို လိုက်ရှာဖွေပါတော့တယ် သူတို့တွေ ကတ်တွေကို အချိန်မှီ စုဆောင်းနိုင်မလား... စုနေတဲ့ အတောအတွင်း ဘယ်လို အခက်အခဲတွေနဲ့ ...
IMDB: 6.0/10 7,576 votes
Kajaki Kajaki 2014 စစ်ကားကောင်းကောင်းလေးကြည့်မလား ? မျက်စိလည်းမနောက် ၊ ဇာတ်လမ်းလေးလည်းကောင်း ၊ တကယ့်အဖြစ်အပျက်ဇာတ်ကားလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော် ဒုံးဒုံးဒိုင်းဒိုင်း နဲ့ ပစ်တဲ့စစ်ကားတော့မဟုတ်ဘူးနော် ဒါပေမဲ့ ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ကြည့်ရမှာတော့ အာမခံပါတယ်။ မိုင်းထိတဲ့ကားလေးပါ ။ ဇာတ်လမ်းလေးကရိုးပါတယ် ။ ဟိုဘက်ကမ်းကိုသွားဖို့ လမ်းဖြတ်ကူးရမယ်ပေါ့။ အဲ့လမ်းက ဖြစ်ချင်တော့ ဗုံးမြေဖြစ်နေတယ် ။ပေါက် လိုက်တာမှ တအုံးအုံး နဲ့ ။ ပြီးတော့ ကယ်ဆယ်ရေးကိုစောင့်ရင်း ဇာတ်လမ်းကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီဇာတ်ကားလေးကို ညွှန်းချင်လည်းဆိုတော့ အဲ့လမ်းမှာဗုံးထိရင်း အချင်းချင်း ရိုင်းပင်းကူညီတဲ့စိတ်ဓါတ်၊ စစ်ဆိုတာ ဘယ်လောက်တောင်အကြပ်ရိုက်လဲဆိုတာကို ဒါရိုက်တာက ပညာသားပါပါ ရိုက်ပြထားပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် စစ်ပြန်တွေ အချင်းချင်း အရမ်းရင်းနှီးတယ်ဆိုတာ ဒီလိုအခက်အခဲတွေကြောင့်ဆိုတာ အခုမှသိရတော့တယ်။ စစ်သုံးစကားတွေလည်း ဗဟုသုတအဖြစ်ထည့်ပေး ထားသေးတယ်နော်။ အရမ်းကောင်းတဲ့ကားလေးပါ… ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်….။ ။
IMDB: 7.1/10 11,825 votes
Alludu Seenu (2014) ##unicode Sai Srinivas Bellamkonda မင်းသားရဲ့ ကားကောင်းကောင်းလေးတစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ.. ဒီကားက အရမ်းကို ဇာတ်အိမ်မိုက်တယ်ဗျ.. ‌ဆီနူးလို့ခေါ်တဲ့ ကောင်လေးက လူတွေကို လှည့်တဲ့ပတ်တဲ့နေရာမှာဆရာကြီးပေါ့... သူ့နဲ့ အတူတူနေတဲ့ နာဆီမာဆိုတဲ့သူတစ်ယောက်လည်းရှိတယ်.. ရွာမှာ သူတို့နှစ်ယောက်က အဲ့ဒီမှာလှည့်ပတ်ကျက်စားနေကြရင်း..အကြွေးတွေမဆပ်နိုင်တော့လို့ အကြွေးရှင်တွေဆီကနေထွက်ပြေးလာခဲ့တော့တယ်.. သူတို့ထွက်ပြေးမယ့် နေရာက ဒူဘိုင်းကိုပေါ့.. ဒူဘိုင်းမှာ အလုပ်တွေ လုပ်ပြီး သူဌေးဖြစ်မှ ပြန်လာဆပ်မယ်ဆိုပြီးသူတို့ရည်ရွယ်ထားကြတာပါ . အဲ့လိုနဲ့ ဒူဘိုင်းကို သွားဖို့ ချန်နိုင်းရထားကို အရင်စီးသွားခဲ့ကြတယ်. ဖြစ်ချင်တော့ လမ်းမှာ ချန်နိုင်းသွားတဲ့ ရထားက ပြောင်းသွားပြီး.. အမှတ်မထင်နှစ်ယောက်သား ဟိုက်ဒရာဘတ်ကို ရောက်သွားတဲ့ အခါမှာတော့.. အလှည့်အပြောင်းတွေနဲ့ သောက်တလွဲတွေဖြစ်တော့တာပဲ.. မင်းသားကလဲ ဖိုက်တင်ခန်းတွေဘယ်လိုလန်းလဲဆိုတာ သိတဲ့အတိုင်းပါပဲ.... ‌နာဆီမာရဲ့ အတိတ်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကြောင်းတွေကို ဆီနူးတို့ လူတစ်စုဖြေရှင်း ကြတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ ဇာတ်အိမ်ဇာတ်ကွက်တွေလည်း ပါဝင်ထားမို့ အများကြီးမပြောတော့ပါဘူး ကဲ ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါအုန်း.. ##zawgyi Sai Srinivas Bellamkonda မင္းသားရဲ႕ ကားေကာင္းေကာင္းေလးတစ္ကားနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ.. ဒီကားက အရမ္းကို ဇာတ္အိမ္မိုက္တယ္ဗ်.. ‌ဆီႏူးလို႔ေခၚတဲ့ ေကာင္ေလးက လူေတြက္ို လွည့္တဲ့ပတ္တဲ့ေနရာမွာဆရာႀကီးေပါ့... သူ႔နဲ႔ အတူတူေနတဲ့ နာဆီမာဆိုတဲ့သူတစ္ေယာက္လည္းရွိတယ္.. ရြာမွာ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္က အဲ့ဒီမွာလွည့္ပတ္က်က္စားေနၾကရင္း..အေႂကြးေတြမဆပ္ႏိုင္ေတာ့လို႔ ...
The Great Hypnotist ဇာတ္လမ္းအမ်ိဳးအစားကေတာ့ အားလံုးစိတ္ဝင္စားၾကမယ့္ Mystery – Thriller ပဲျဖစ္ပါတယ္ အိပ္ေမြ႔ခ်ကုထံုးမွာ အရမ္းေတာ္တဲ့စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္ ေဒါက္တာရႊီေယြနင္ဆီကို ထူးျခားတဲ့ case အေနနဲ႔ သရဲေတြကိုျမင္ႏိုင္တယ္လို႔ေျပာလာတဲ့ လ်န္ေရွာင္ရန္ဆိုတဲ့မိန္းမတစ္ေယာက္ ကုသခံဖို႔ေရာက္လာခဲ့တာကေန အစျပဳဇာတ္ေၾကာင္းဆင္ထားပါတယ္ သူ႔ပညာကို အေတာ္ေလးယံုၾကည္မႈရွိၿပီး မာနႀကီးတဲ့ ေဒါက္တာရႊီေယြနင္တစ္ေယာက္ အခ်က္အလက္က်စြာနဲ႔ သူ႔ကိုတန္ျပန္တုန္႔ျပန္လာတဲ့ လူနာနဲ႔ေတြ႔ၾကံဳလာရတဲ့အခါ ဘာေတြဆက္ျဖစ္လာမလဲ အဲဒီအခ်က္အလက္ဆိုတာေတြကေရာ အမွန္တကယ္ပဲလား ေနာက္ကြယ္မွာ ဘာလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ေတြဆက္ရွိေနမလဲဆိုတာ ရင္သပ္ရႈေမာရင္းၾကည့္ရႈရပါလိမ့္မယ္ အဓိကဇာတ္ေကာင္ေနရာေတြကေတာ့ Forbes China Celebrity 2020 ရဲ႕ နံပါတ္၂ေနရာမွာရွိေနတဲ့ နာမည္ႀကီးအႏုပညာပါရမီရွင္ Xu Zheng ျဖစ္ၿပီး တြဲဖက္အားျဖည့္ထားသူကေတာ့ So Close ဇာတ္ကားရဲ႕ရဲေမဆိုရင္ ရုပ္ရွင္ပရိသတ္အားလံုးသိႏိုင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္ ဆရာဝန္နဲ႔လူနာ ေဆြးေႏြးကုသေနတဲ့ေဟာခန္းထဲမွာ ဇာတ္ကားၿပီးသြားတာျဖစ္ေပမယ့္ အေတာ္ေလးကိုစိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းၿပီး ၿပီးလို႔ၿပီးလိုက္မွန္းေတာင္မသိျဖစ္သြားမယ္ဆိုတာ လံုးဝအာမခံပါတယ္ ။
IMDB: 7.0/10 2,324 votes